I-Charming Millidgeville One Bedroom Apartment.
Jabulela ikhaya elithule nelinokuthula kude nasekhaya. Lolu hlu luseduze nezitolo zegrosa, izindawo zokudlela, nempilo yasebusuku, futhi lihamba ibanga elide ukuya emfuleni kanye neRoyal Kennebecasis Yacht Club. Lena indawo ekahle yokuhlala ngenkathi uhlola indawo yaseSaint John, noma uma uthanda ungahlala phansi edekhini yangasese uphumule. Uma unenhlanhla, ungase ubone umndeni wezinyamazane zizulazula.
Lesi sikhala siyifulethi elisanda kulungiswa, elizimele kakhulu. Indawo yokungena isezingeni eliphansi futhi inendawo yayo yokupaka. Sihlinzeka ngezinto eziningi ezibalulekile, futhi ikhishi ligcwele kahle. Ithala lokuphuma legumbi lokuphumula linikeza izivakashi ithuba lokuhlala futhi ujabulele ukubuka endaweni enhle yemvelo.
4.96(200 okushiwo abanye)
4.96 · 200 okushiwo abanye
Cishe imizuzu eyi-10 ukuya endaweni yaseSaint John uptown. Imizuzu embalwa kuphela ukusuka ogwini lomphakathi eTucker Park noma izindlela zokuhamba izintaba e-Rockwood Park, kanye negalofu. Futhi singaphakathi kwebanga lokuhamba leRoyal Kennebecasis Yacht Club. Eduze kwe-UNB kanye ne-Saint John Regional Hospital (imizuzu emi-5 ngemoto). Ungavakashela kalula i-Irving Nature Park (imizuzu eyi-15) noma iFundy National Park (60 min) ukusuka lapha.
Ifulethi linikeza ukungena okungenakhiye ukuze izivakashi zikhululeke ukuza nokuhamba ngokuthanda kwazo. Ababungazi bayakuthanda ukuhlangana nabantu abasha, kodwa futhi bahloniphe ubumfihlo bezivakashi zethu. Bahlala esizeni endlini enamathiselwe, futhi batholakala ngombhalo, i-imeyili, ucingo, noma ukungqongqoza nje emnyango. Bahlale bezimisele ukusiza nganoma yini izivakashi ezingase ziyidinge noma amathiphu okuthi zingaya kuphi noma ngenzeni endaweni!
Ifulethi linikeza ukungena okungenakhiye ukuze izivakashi zikhululeke ukuza nokuhamba ngokuthanda kwazo. Ababungazi bayakuthanda ukuhlangana nabantu abasha, kodwa futhi bahloniphe…